Sunday 5th of December 2021 / 07:58:00 PM
कक्षा एकदेखि १२ सम्मको पाठ्यक्रम फेरिने
अनलाइन दर्पण 2018-02-12
काठमाडौं, फागुन १ । विद्यालय तहको शिक्षालाई व्यावहारिक र कानुनसम्मत बनाउन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा एकदेखि १२ सम्मको पाठ्यक्रम परिमार्जनलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ।
शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनसँगै कक्षा एकदेखि बाह्रसम्मको शिक्षा
शिक्षाध्यक्षको कार्यालयले सबै डिन कार्यालयलाई एउटै क्यालेन्डर दिएको थियो। तर, कत
छोराछोरीलाई स्कूलको भरमा मात्रै होइन, आफूसँगै राखेरसमेत पढाउनुस्
अनलाइन दर्पण 2018-01-15
आजकालका अधिकांश आमाबाबुहरु काममा व्यस्त हुन्छन् । व्यस्तताकै कारण आफ्ना छोराछोरीलाई पर्याप्त समय दिएको पाइँदैन । तर, एक अध्ययनले प्रत्येक आमाबाबुले व्यस्तताबीच पनि केही समय निकाले आफ्ना बच्चाको पढाईमा दिन सुझाव दिएको छ । आफूसँगै उनीहरुलाई राखेर पु
विद्यार्थीको यस्तो त्रास
अनलाइन दर्पण 2017-12-28
टाढाबाटै हेर्दा सुन्दर र
यो सबैलाई प्रेरणा दिने नजाद भल्लाउद–बेल्कासेम, एक मोरोक्कोकी केटीको कथा हो जो आज फ्रान्सको शिक्षा मन्त्री बन्न सफल भएकी छिन् । उनको जन्म सन् १९७७ मा
चौंरीको आलो रगत र मासु बिक्रीबाट शिक्षकको तलब भत्ता
बेनी । सरकारी दरबन्दी नहुँदा विद्यालय सञ्चालन गर्न कठिन भएपछि म्याग्दीका दुईवटा विद्यालयले संयुक्तरुपमा लगानी गरी चाैंरीपालेर त्यसबाट हुने आम्दानीे शिक्षकलाई तलब खुवाउने र भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वधारमा खर्च गर्ने गरेका छन् ।
प्रदेश जान चाहने शिक्षाका कर्मचारीलाई दुई दिने म्याद
अनलाइन दर्पण 2017-12-10
काठमाडौं - प्रदेशमा जान चाहने शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले दुई दिन भित्र निवेदन दिनु पर्ने भएको छ । शिक्षा सेवाका राजपत्रांकित तृतीयदेखि प्रथम तहसम्मका कर्मचारीलाई दुई दिनभित्र निवेदन दिन शिक्षा मन्त्रालयले आईतबार सूचना निकालेको हो ।
कक्षा ११ काे रिजल्ट अाज सार्वजनिक हुने
अनलाइन दर्पण 2017-12-03
१८ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय परिक्षा वाेर्डले अाज कक्षा ११ काे रिजल्ट सार्वजनिक गर्ने भएकाे छ । वाेर्डले अाफ्नाे फेसबुक पेज
त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा एमएस्सी फिजिक्स थर्ड सेमेष्टरको नतिजा प्रकाशित नतिजा हेर्नुहाेस
काठमाडौं, २० कात्तिक । त्रिभुवन विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानले एमएस्सी फिजिक्स थर्ड सेमेष्टरको नतिजा प्रकाशित गरेको छ । संस्थानले गत चैतमा लिइएको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । ०७१ सालमा नियमित
किशन र दृष्टि बने मिस्टर एण्ड मिस माेडर्न २०७४
भक्तपुर । मिस्टर एण्ड मिस माेडर्न कन्टेस्ट २०७४ काे उपाधी किशन थापा र दृष्टि थापाले हात पार्न सफल भएका छन् । दधिकाेटस्थित मोडर्न स्कुल र कलेजले शुक्रबार आयोजना गरेको प्रतियोगीतामा ५५ प्रतिस्पर्धील
को को हुन बौद्धिक चोरी गर्ने डाक्टर ?
काठमाडौं, २९ असोज। नेपालका पाँच चिकित्सकलाई इन्डोनेसियास्थित बाली मेडिकल जर्नलले कालोसूचीमा राखेको छ । कालोसूचीमा भारतीय चिकित्सक पनि छन् ।जर्नलले बौद्धिक चोरीको आरोपमा उनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको हो । कालोसूचीमा पर्ने नेपाली
दिमाग लगाउनुस्, यो चित्रमा कतिवटा बाघ छन् ?
अनलाइन दर्पण 2017-10-08
दिमाग लगाउनुपर्ने चित्रहरू इन्टरनेटमा छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन् । केही मानिसले दिमाग लगाएर यस्ता चित्रको वास्तविकता पत्ता लगाइहाल्छन् भने धेरैले चाहिँ भेउ पाउँदैनन् ।
तपाईंकाे अाँखा तेजिलाे अनि दिमाग तीखो छ भने तपाईंले यो चित्रमा द
विधेयक संसाेधनकाे विराेधमा संयुक्त विद्यार्थी अान्दाेलन
अनलाइन दर्पण 2017-09-23
काठमाडौं, ७ असोज। संसदमा भएकाे शिक्षा एेन विधेयककाे नवाै संसाेधन राष्ट्रकाे हित विपरीत भएकाे भन्दै नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी निकट अखिल (क्रान्तिकारी) सहित ५ विद्यार्थी संगठनले अाज शान्तिबाटिकामा विराेध प्रदर्शन गरेकाे छ ।
गौमूलमा स्वरोजगारका अवसर वृद्धि गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण
काठमाडौं । अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएपछि बाजुराकाे गौमूल गाउँपालिकाको गाउँसभाले विभिन्न आकर्षक निर्णय गर्दै चालु वर्षको बजेट विनियोजन गरेको छ । गाउँसभाले बेरोजगार युवालाई स्वरोजगारका अवसर वृद्धि गर्न शैक्षिक प्रमाणप
भक्तपुर, २७ भदौ । मध्यपुरथिमीस्थित चक्रवर्ती हवी नर्सिङ कलेजले कुनैपनि स्वीकृति नलिई अवैधानिकरुपमा विद्यार्थी भर्ना गरेको सूचना आएपछि तत्काल अवैधानिक रुपमा लिएको विद्यार्थी भर्ना रोक्न भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी &n
बाढीपीडितलाई एभरेस्टको १ लाख ३१ हजार सहयोग
अनलाइन दर्पण 2017-09-04
भक्तपुर,१९ भदाै । ब्यासीस्थित एभरेस्ट इंगलिस स्कुलले तराईका बाढीपहिरोका कारण घरवारवीहिन बनेकाहरुका लागि १ लाख १ हजार १ सय ११ रुपैयाँ सहयोग गरेकाे छ ।
विद्यालयका विद्यार्थी, शिक्षक,तथा कर्मचारीहरूद्वारा संकलन गरिएकाे
सिबर्डको १६ औ बार्षिकोत्सबमा कविता प्रतियोगिता
अनलाइन दर्पण 2017-09-03
भक्तपुर । मध्यपुरथिमिको शंखधरचोकस्थित सिबर्ड ईन्टरनेसनल कलेजले आफ्नो १६ औ बार्षिकोत्सबको अवसरमा अन्तर बिद्यालय भक्तपुर जिल्ला स्तरीय कविता प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको छ ।
प्रतियोगितामा जिल्लाका विभिन्न बिद्यालयका ३५ जना विद्
आज पुस्तकालय दिवस मनाइँदै
अनलाइन दर्पण 2017-08-31
काठमाडौ, १५ भदौ। समृद्ध नेपालको आधार : पुस्तकालयको विकास’ भन्ने नाराका साथ आज १० औँ पुस्तकालय दिवस मनाइँदैछ ।
पठन संस्कृति बढाउनका साथै प्रत्येक स्थानीय तहमा पुस्तकालयको स्थापना गराउन प्रवर्द्धन गर्दै सामुदायिक र निजी क्षेत्रका पुस